Ukuvakasha nokuhamba Igalari yezithombe | Isihambeli Sokuhamba Ngezokuvakasha Odisha
Injabulo ilandelwa njalo njengesithunzi esingaveli-esivela lapho isithombe sikhombisa wena wangempela.
SandPebbles ihlukumeza kakhulu izithombe ezakha ithoni ekhangayo ukuze ubuke ubuhle bayo bemvelo. Indlela yokuphila nemvelo, lapho okuhlangenwe nakho okuhlangenwe nakho kufaka khona umbala weqiniso wamadolobha ngendlela enhle.
Izithombe nezithombe zethu zimelela ukuhlala okuhlanzekile kwemvelo.
Layisha okuningi ...Landela on Instagram